Isreal oo Duqaymo Culus Ku Garaacday Qaybo Kamida Magaaladda Qudus | Baligubadlemedia.com
Isreal oo Duqaymo Culus Ku Garaacday Qaybo Kamida Magaaladda Qudus
December 9, 2017 - Written by admin
Israaa’iil ayaa sheegtay in ay bartilmaameedsatay goobo ay leeyihiin garabka hubaysan ee Xamaas iyaga oo ka aar goosanaya gantaallo lagu soo riday.
Milatariga Israa’iil ayaa sheegay in ay subaxnimadii hore ee Sabtida duqeeyeen goob hubka lagu sameeyo iyo bakhaar rasaasta lagu kaydiyo
Gantaallada ayaa Israa’iil lagaga soo riday dhanka Qaza mid ka mid ahna wuxuu ku dhacay magaalada koonfurta ku taalla ee Sderot.
Waxyaabihii u dambeeyay ee xaaladdan ka soo kordhay
Labo ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa dhintay ka dib markii ciidammada Israa’iil ay rasaas ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Qaza markii ay socdeen isku dhacyadii Jimcihii.
Israa’iil waxay sheegtay in ay joojisay gantaal, mid kalana waxaa laga helay dhul bannaan, halka mid kalana uu ku dhacay Sderot ammin dambe oo Jimcihii ah, inkastoo aan la soo sheegin wax khasaare ah oo uu gaystay.
Ciidammada cirka ee Israa’iil ayaa weerarro dhawr ah ku qaaday goobo ay Xamaas leedahay, wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiintuna waxay sheegtay in ay ku dhaawacmeen 25 ruux.
Weerarro dheeri ah oo xagga cirka ahna waxay mar kale fulisay saacadihii hore ee Sabtida, ka dib markii uu gantaalku ku dhacay Sderot. Ilaa iyo hadda ma cadda inta ay la egtahay khasaaraha ka dhashay weerarradaas.
Subaxnimadii hore ee Jimcaha Fatxi Hammad oo ah masuul sare oo Xamaas ka tirsan ayaa sheegay in ruux kaste oo doonaya in uu Qudus u raro safaaraddiisa uu yahay caddawga Falastiiniyiinta.
Dunida Muslimka oo dibadbaxyo uga jawaabtay go’aankii Trump ee Qudus
Qudus: “Dharbaaxada qarniga” iyo Jawaabta Bariga dhexe
Safiiradda Maraykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay Nikki Haley ayaa iyaduna Jimcihii kulanka Qaramada Midoobay ka sheegtay in Maraykanku “uu aqoonsanayo waxa caadiga ah oo ah in Qudus ay tahay caasimadda Israa’iil”.
Waxay sheegtay in Maraykanka uu sii wadayo “ka go’naanshaha in xal waara la gaaro”, Qaramada Midoobayna waxay ku eedeeysay in aysan dhexdhexaad ahayn, waxayna sheegtay “in ay tahay xarrunta hogaaminaysa saaxiibtino la’aanta Israa’iil ka dhanka ah, arrintaas oo ah mid laga caroodo”.